Ajụjụ - Tianjin TheOne Metal Products Co., Ltd.
Nke mbu, were ihe kacha mma nye gi ihe ahia gi nke kacha nke di ala
Nke abuo, nwekwuo ikike imeputa ihe, belata onu ahia ahia a.
Nke ato, usoro ikpoputa jikọtara ọnụ, belata ọnụahịa onye ọrụ.
Ihe bu, Egbubila oghere ebe a na-edebe ihe, belata onu ahia mbulata.
Ee, anyị nwere ike ịnye ọtụtụ akwụkwọ gụnyere asambodo akụrụngwa, Nyocha nyocha ngwaahịa na akwụkwọ mkpochapụ omenala.
Maka nlele, oge ndu bụ ihe dịka 2-7 ụbọchị. Maka usoro mmepụta, oge izizi bụ ụbọchị 20-30 ka ị nwetasịrị nkwụnye ego. Oge mbu ga-adị mma ma (1) anyị enwetara nkwụnye ego gị, yana (2) anyị nwere nkwenye ikpeazụ gị maka ngwaahịa gị. Ọ bụrụ na oge ndị ọrụ anyị anaghị arụ ọrụ na usoro iheomume gị, biko were ire gị ka ị gafee ihe ndị ị chọrọ. N'okwu niile anyị ga-anwa ịnabata mkpa gị. N'ọnọdụ ka ukwuu, anyị na-enwe ike ime ya.
Can nwere ike ịkwụ ụgwọ na akaụntụ akụ anyị, Western Union, T / T, L / C n'anya na ndị ọzọ.
30% itinye ego na mbu, 70% itule tupu nnyefe
Gịnị bụ njikwa ogo ngwaahịa a?
1.Amalite mmepụta, anyị na-enyocha akụrụngwa niile na kemịkalụ na akụrụngwa
2. N'ime usoro mmepụta, QC anyị na-eme nlele na ntụle oge.
3.n'ihi ngwaahịa a rụchara, anyị ga-enyocha ọdịdị, ọkpụrụkpụ bandụ * ọkpụrụkpụ, sọks na ibu iyi na ihe ndị ọzọ
4. Tupu nnyefe, anyị ga-ese foto maka ngwongwo ahụ, mgbe ahụ, a ga-edobe usoro nyocha niile ma mee mkpesa nyocha.
Ihe anyị na - eburu, bụ akpa plastik na mpụga na mpụga pallet.Thus ga - egbochi ngwongwo ndị ahụ mgbochi mmiri na katọn ndị ahụ .Ọ bụrụ na ị nwekwara ihe ndị ọzọ, pls kpọtụrụ anyị, anyị ga - anwa imezu ya maka gị.